Fifaninanana iraisam-pirenena: Judokas malagasy roa hiady ny ho tompondakan’i Frantsa | NewsMada
Fifaninanana iraisam-pirenena: Judokas malagasy roa hiady ny ho tompondakan’i Frantsa
Tsy mitsanga-menatra ireo mpanao fanatanjahantena malagasy mila ravinahitra any ivelany. Ho an’ny taranja judo, nahazo ny tapakila hahafahana miatrika ny fiadiana ny tompondaka an’i Frantsa, eo amin’ity taranja ity ny Judokas malagasy mirahavavy. Anisan’izany Rasoanaivo Irinah sy Rasoanaivo Mialy. Hotanterahina manomboka ny volana febroary izao ny fifaninanana aorian’ny “Grand Slam de Paris”. Nandritra ny fifaninanana natrehin’izy mirahavavy, ny faran’ny herinandro teo, tany Seine et Marne, ka nahazoany medaly volamena roa avy no nandrombahan’izy ireo izany tapakila izany.
Mpiangaly ny taranja Judo kalaza ny rain’izy mirahavavy; Rasoanaivo Dida Patrick. Efa tao anatin’ny ekipam-pirenena malagasy ny Judo, sokajy latsaky ny 71 kg ary tena nikoizana tamin’izany fotoana izany. Nanahaka azy ihany koa ireto zanany roa vavy ireto ary manana ny lazany any Frantsa, ka izao hiatrika fifaninanana goavana izao.
Tsiahivina fa efa manana ny toerany any amin’ny fifaninanam-pirenena frantsay ireo judokas malagasy, amin’izao fotoana izao. Anisan’ireo efa nisongadina tamin’izany i Fetra Ratsimiziva, izay efa nisolo tena an’i Madagasikara, tamin’ireo fifaninanana iraisam-pirenena isan-tokony.